काठमाडौं , १७ जेठ । जातीय हिंसा टाउको दुखाइको विषय बन्दै गएको दक्षिणी सुडानमा दुई युवा समूहबीच भएको भिडन्तमा कम्तीमा २२ जनाको मृत्यु भएको छ । दक्षिणी सुडानको सीमा क्षेत्रमा बिहीबार यो घटना भएको हो । जातीय हिंसा यहाँ पटकपटक हुने गरेको छ र यस्ता झडपमा धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन् । गत मंगलबार भएको झडपमा […]
संविधानसभा सदस्यले पाए पदक
काठमाडौँ, १६ जेठ । सरकारले पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा निर्वाचित सदस्यलाई ‘संविधानसभा पदक’ बाट विभूषित गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आज आयोजित एक समारोहका बीच उहाँहरुलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रकोतर्फबाट पदकसहित सम्मान प्रदान गर्नुभएको हो । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा निर्वाचित भई संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुयाएको भन्दै एक हजार १०६ सभासद्लाई सम्मान […]
भैंसेपाटीमा केमिकल फ्याक्ट्रिमा भिषण अागलागी, कति भयाे क्षति ?
ललितपुर, १६ जेठ – ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २५ स्थित भैंसेपाटीमा रहेको सोडियम हाइड्रो सल्फेट केमिकल फ्याक्ट्रीमा भीषण आगलागी भएको छ । किरण प्रकाश श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको सो फ्याक्ट्रीमा आज (बिहीबार) बिहान आगलागी भएको हो । बिहान साढे ३ बजेबाट लागेको आगो केमिकल फ्याक्ट्री भएका कारण अझै नियन्त्रणमा आउन नसकेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।नियन्त्रणका […]
बजेटकाे पाठ -२
उत्पादक श्रम र रोजगारीबाट मात्र उत्पादन वृद्धि, दिगो सामाजिक सुरक्षा र आत्मसम्मानको विकास हुने भएकोले मैले रोजगारीलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेको छु। चालु आर्थिक वर्षमा शुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न रोजगार सेवा केन्द्रहरुमा सूचित बेरोजगारहरुलाई सार्वजनिक विकास निर्माणमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। स्वरोजगारी सिर्जना गर्न सीप तथा उद्यमशीलता विकास र विऊ पूँजीको […]
काठमाडौं, १६ जेठ –ब प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुख महोदय‚राष्‍ट्रियसभाका सम्माननीय अध्यक्ष महोदय‚ १. नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले संघीय संसदको यस संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७7 को बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा गौरवको महशुस गरेको छु। यस महत्वपूर्ण अवसरमा मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा ल्याउने क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण महान शहीदहरु तथा राष्ट्रप्रति समर्पित दिवङ्गत आदरणीय नेताहरुमा […]
काठमाडौं, १५ जेठ – संविधानमा नै व्यवस्था गरिए बमोजिम जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने तयारी पूरा भएको छ । सरकारले बुधबार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभामा दिउँसो ४ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । सरकारले बजेट अत्यन्तै लोकप्रिय हुने दाबी गरेको छ । बजेटको गत […]
-नारायण पौडेल- नरेन्द्रभाइ मोदीको नाम भारतीय राजनीतिमा विभिन्न रेकर्डसहित स्थापित छ । हालै भएको निर्वाचनपछि थप रेकर्ड कायम भएको छ । भारत स्वतन्त्र भएपछि जन्मिएको पुस्ताबाट प्रधानमन्त्री बन्ने उनी एकमात्र हुन् । उनी लगातार दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने पहिलो गैरकाँग्रेस हुन् । आमा ज्युँदै हुँदा प्रधानमन्त्री बन्ने तथा सबैभन्दा धेरै मतान्तरले लोकसभामा विजयी हुने […]
काठमाडाैं, १४ जेठ । राजधानी काठमाडौंमा भएका शृंखलावद्ध बम विस्फोटमा मारिने चारै जनाबारे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले अधिकारीक धारणा सार्वजनीक गरेका छन् । सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विप्लवले मृत्यु भएका व्यक्ति आफ्ना कार्यकर्ता भएको स्वीकार गरेको छ । पार्टी महासचिव विप्लवले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विस्फोटमा महान, दीपेन्द्र, प्रज्वल शाही र […]
काठमाडौं, १४ जेठ । प्रमूख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र विप्लव नेकपालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा दुई धारणा देखा परेका छन् । कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले विप्लव राजनीतिक शक्ति भएकाले वार्तामार्फत समाधान गर्नुपर्ने भन्दै आफू वार्ताको मध्यस्थता गर्न तयार रहेको धारणा सार्वजनीक गरे लगत्तै अर्का नेता शशांक कोइरालाले भने विप्लव आतंककारी भएको र उसले संविधान फेर्ने मनसाय राखेकाले […]
काठमाडौं, १४ जेठ- नेपालकाे उत्तरी छिमेकी देश चिनसँग जाेड्ने तातोपानी खासा नाका अाजदेखी सञ्चालनमा अाएकाे छ । मंगलबार बिहान ४ वटा कन्टेनर ऊन ल्याउन खासा पठाएपछि नाका खुलेको हो । ती कन्टेनर बुधबार काठमाण्डौ आइपुग्ने जनाइएको छ । सोमबार बेलुका नै ती कन्टेनरको पास प्रक्रिया पूरा गरी मंगलबार बिहानै चिनिया पक्षको अनुमतिमा खासाका लागि प्रवेश […]